Apr 20, 20193min read Science FictionHorror
ကျွန်တော်တို့တွေ နေ့စဉ်နဲ့အမျှ မိမိကိုယ်ကို တနည်းနည်းနဲ့ဖျက်ဆီးနေကြတာလား။
ဇာတ်လမ်းရဲ့စစချင်းမှာ အာကာသကနေ ဥက္ကာပျံသဏ္ဍာန်အရာတစ်ခု ကမ္ဘာမြေပေါ်ကို ကျလာတယ်။ ထိုအရာဟာ ပင်လယ်ကမ်းစပ်တစ်ခုဘေးနားက မီးပြတိုက်လေးတစ်ခုနားမှာ ကျရောက်သွားခဲ့တယ်။ ဒီလိုနဲ့Annihilation ဇာတ်ကားကို စဖွင့်လိုက်တယ်။ ဒီနောက် ကျွန်တော်တို့တွေ့ရတာက အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ကို လူတစ်ချို့က အခန်းကျဉ်းငယ်လေးတစ်ခုမှာ မေးခွန်းတွေ မေးနေတယ်။ ထိုမေးတဲ့သူတွေက ကာကွယ်ရေးဝတ်စုံတွေ အပြည့်ဝတ်ဆင်ထားကြတယ်။ ထိုအမျိုးသမီးကတော့ သာမာန်အဝတ်အစားပဲ ဝတ်ထားတယ်။ ဒီလိုနဲ့ထိုအမျိုးသမီးရဲ့အတိတ်ကို စပြလိုက်တယ်။ ထိုအမျိုးသမီးဟာ အရင်က John Hopkins ဆေးတက္ကသိုလ်ရဲ့lecturer တစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး နာမည်ကတော့ Lena လို့အမည်ရတယ်ဆိုတာ သိလာရတယ်။ Lean ရဲ့ခင်ပွန်းဖြစ်သူ Kane ဟာ စစ်သားတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး သူ့နောက်ဆုံးထွက်သွားတဲ့ စစ်ဆင်ရေးရဲ့အသေးစိပ်ကိုတော့ သူ့မိန်းမဖြစ်သူကို အသိမပေးခဲ့ဘူူး။ Kane တစ်ယောက် ထိုစစ်ဆင်ရေးအတွက် ထွက်ခွာသွားခဲ့တာ တစ်နှစ်ကျော် ကြာမြင့်သွားတည့်တိုင် ဘာအဆက်အသွယ်မှ ပြန်မရခဲ့တော့တဲ့အတွက် စစ်ဆင်ရေးအတွင်းကျဆုံးသွားခဲ့ပြီလို့တောင် မှတ်ထင်ထားခဲ့ကြပြီ။ ဒီလိုနဲ့တစ်ညမှာတော့ Kane တစ်ယောက် ပြန်ရောက်လာခဲ့တယ်။ သူဘယ်လိုပြန်ရောက်လာလဲဆိုတာကိုတော့ မှတ်မိပံုံမရ။ Kane ကို ကြည့်ရတာ မူမှန်မဟုတ်တော့သလိုပဲ။
သိပ်မကြာခင်မှာပဲ Kane တစ်ယောက်သွေးတွေအန်လာတော့ အရေးပေါ်လူနာတင်ကားပေါ်မှာတင် စစ်တပ်က လာရောက်ပြန်ခေါ်ဆောင်သွားတော့တယ်။ ခင်ပွန်းဖြစ်သူရဲ့ဖြစ်ရပ်မှန်ကို သိလိုစိတ်နဲ့Lena ထိုစခန်းကို ရောက်ရှိလာတယ်။ ထိုစခန်းအမည်ကတော့ Southern Reach လို့အမည်ရပြီး ဇာတ်ကားရဲ့ပထမဆုံးဇာတ်ဝင်ခန်းက မီးပြတိုက်နဲ့မိုင်အနည်းငယ်ဝေးတဲ့ ဒေသမှာ တည်ရှိနေတယ်။ ဒီမှာတင် ထိုစခန်းရဲ့Psychologist ဖြစ်သူ Ventress ဆိုတဲ့အမျိုးသမီးက Lena ကို ဖြစ်ရပ်မှန်တွေ ရှင်းပြတော့တယ်။ သူတို့ရဲ့စခန်းရှေ့နားမှာ ဖြည်းညင်းစွာ ရွေ့လျားနေတဲ့ အရောင်သဏ္ဍာန်များစွာနဲ့ပုံဖော်ထားတဲ့ နံရံကြီးတစ်ခု ရှိတယ်။ ထိုနံရံကြီးက အတွင်းဒေသတစ်ခုရဲ့အပြင်ဘက် နယ်နမိတ်ပဲ ဖြစ်တယ်။ ထိုဒေသကိုတော့ Area X လို့ခေါ်ကြပြီး Area X ကို ကာကွယ်ထားတဲ့ အရောင်တွေနဲ့ပြေးနေတဲ့နံရံကြီးကိုတော့ Shimmer လို့ခေါ်ကြတယ်။ ထို Area X က လွန်ခဲ့တဲ့3နှစ်ခန့်ကတည်းက electromagnetic field စပေါ်လာခဲ့ပြီး ထိုအထဲက radio waves တွေသည် ပြင်ပကို မရောက်နိုင်ပေ။ ထိုအထဲကို လူသားတွေ စေလွှတ်ခဲ့ပေမဲ့ ဘယ်သူမှ ပြန်မလာနိုင်ခဲ့ကြပဲ Lean ရဲ့ခင်ပွန်းဖြစ်သူ Kane သာလျှင် ပထမဆုံး ပြန်လာနိုင်တဲ့ လူသားတစ်ယောက် ဖြစ်လာတယ်။ ထို Area X ထဲမှာ အရာတစ်ခုခု၊ အကောင်တစ်ခုခုက ထိုလူသားတွေကို သတ်ဖြတ်ပစ်ခဲ့တာလား၊ ထိုလူသားတွေကပဲ မိမိကိုယ်ကို သေစေအောင် ထို Area X ကြီးကများ ပြုလုပ်နေလားဆိုတဲ့ ထင်မြင်ယူဆချက်တွေ ရှိလာခဲ့ကြတယ်။ ပိုဆိုးတာက ထို Area X ကြီးရဲ့နံရံ Shimmer ကြီးဟာ ကျယ်ပြန့်သထက် ကျယ်ပြန့်လာနေတယ်။
ဒီလိုနဲ့နောက်တစ်ကြိမ် လူသားတွေ ထို Shimmer ထဲကို ထပ်သွားကြရတော့မယ်။ ဒီတစ်ခါတော့ ထိုအထဲကိုဝင်ကာ မီးပြတိုက်အထိ သွားပြီး သုတေသနပြုလုပ်မဲ့ သူများသည် Psychologist Ventress ဦးဆောင်တဲ့ အမျိုးသမီး5ယောက်အဖွဲ့ပဲ ဖြစ်နေတယ်။ ထိုအထဲတွင် Lena ကိုယ်တိုင်လည်း Volunteer လုပ်ပြီး လိုက်ပါလာခဲ့တယ်။ သူမရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ တစ်ခုတည်းပဲ။ သူမခင်ပွန်းဖြစ်သူ Kane ဘယ်လိုအခက်အခဲတွေ၊ အခြေအနေတွေကို ကြုံခဲ့ရလည်း ဆိုတာ သိဖို့ရယ်၊ သူမကိုယ်တိုင် မိမိကိုယ်ကိုမုန်းတီးစေတဲ့ အတိတ်က လုပ်ရပ်တစ်ခုရဲ့အပြစ်ကြောင့် သူမ လိုက်ပါလာခဲ့တော့တယ်။
Alex Garland ဆိုသူက 1996 ခုနှစ်လောက်မှာ The Beach ဆိုတဲ့ စာအုပ်တစ်အုပ်ထုတ်ခဲ့တယ်။ နောင်တစ်ချိန်မှာတော့ ထိုစာအုပ်ကို Director Danny Boyle က မင်းသား Leonardo DiCaprio နဲ့ရုပ်ရှင်ရိုက်ခဲ့တယ်။ ထို့နောက် သူနောက်ထပ် စာအုပ် ၂ အုပ်ထပ်ရေးသားခဲ့တယ်။ The Tesseract ကို 1998 မှာထုတ်ဝေခဲ့ပြီး The Coma ဆိုတဲ့တတိယမြောက် စာအုပ်ကိုတော့ 2004 မှာ ထုတ်ဝေခဲ့တယ်။ ဒါပေမဲ့ သူ့ရဲ့တတိယမြောက်စာအုပ်စာအုပ် မထုတ်ဝေခင်ကတည်းက သူဟာ ရုပ်ရှင်လောကထဲကို ရောက်နေနှင့်ပြီ။ Director Danny Boyle ပဲ ရိုက်ကူးခဲ့တဲ့ 28 Days Later (2002) ဆိုတဲ့ Zombie ဇာတ်ကားကို Alex Garland က ဇာတ်ညွှန်းရေးသားခဲ့တယ်။ ထိုဇာတ်ကားနဲ့ပဲ သူရုပ်ရှင်လောကထဲကို ဇာတ်ညွှန်းရေးဆရာအနေနဲ့ဝင်ရောက်လာတယ်။ သူ ရေးသားခဲ့တဲ့ ဇာတ်ညွှန်းတွေဟာ အကုန်လုံး sci-fi တွေချည်းပဲ ဖြစ်တယ်။ Sunshine (2007), Never Let Me Go (2010) နဲ့Dredd (2012) တို့ပဲ ဖြစ်တယ်။ ဟိုတလောကလေးတင် သတင်းတစ်ခု ထွက်လာတယ်။ Dredd ဇာတ်ကားထဲကမင်းသား Karl Urban က ဘာပြောခဲ့သလဲဆိုတော့ ထို Dredd ဇာတ်ကားကို credit အရ Director Pete Travis က ရိုက်ကူးခဲ့တယ်ဆိုပေမဲ့ အမှန်က ထိုဇာတ်ကားရဲ့ဇာတ်ညွှန်းရေးဆရာ Alex Garland က ရိုက်ကူးခဲ့တာလို့ပြောခဲ့တယ်။ ကျွန်တော်ထင်တာကတော့ တစ်ချို့creative decisions တွေကို Alex Garland က ဝိုင်းပြီးကူညီ ပေးခဲ့တာမျိုးလို့ပဲ ထင်မိတယ်။ အသေအချာတော့ ဘယ်သူမှလည်း သိနိုင်တော့မယ် မထင်ဘူး။ ဒါနဲ့Alex Garland တစ်ယောက် Director အဖြစ် Ex-Machina ဆိုတဲ့ ဇာတ်ကားကို 2015 မှာ ရိုက်ကူးခဲ့တယ်။ ထိုဇာတ်ကားရဲ့အောင်မြင်ချက်ဟာဝေဖန်ရေးဆရာတွေနဲ့ပရိသတ်တွေရဲ့ကြားထဲမှာ တစ်ကယ်ကို အံ့မခန်းပါပဲ။ 15 million လောက်လေးနဲ့ပဲ ရိုက်ခဲ့တဲ့ ဇာတ်ကားဟာ 36.9 Million လောက်ပြန်ရပြီး Oscar မှာလည်း Best Visual Effects ဆု ရရှိခဲ့သေးတယ်။ ထိုဇာတ်ကားရဲ့အောင်မြင်မှုနဲ့အတူ အခု 2018 မှာ ကျွန်တော်တို့Alex Garland ရဲ့Director အဖြစ် ဒုတိယအကြိမ်ရိုက်ကူးထားတဲ့ Annihilation ဇာတ်ကားကို ကြည့်ခဲ့ရတော့တယ်။
Annihilation ဇာတ်ကားဟာ စာရေးဆရာ Jeff VanderMeer ရဲ့Annihilation ဆိုတဲ့ စာအုပ်ကိုပဲ ပြန်လည်ရိုက်ကူးထားတာပါ။ ထိုစာအုပ်ဟာ Southern Reach Trilogy လို့အမည်ရတဲ့ စာအုပ်တွဲတွေထဲက ပထမဆုံးတစ်အုပ်ပါ။ ထို Annihilation စာအုပ်ကို Paramount က ရိုက်ရှင်ရိုက်ကူးဖို့ဝယ်ယူခဲ့ပြီး Alex Garland ကို ဇာတ်ညွှန်းအတွက် ဌားခဲ့စဉ်က ဒုတိယစာအုပ်နဲ့တတိယစာအုပ်တောင် မထွက်ခဲ့သေးပါ။ Alex Garland က ထိုစာအုပ်ကို အရင်က ဖတ်ထားခဲ့ပေမဲ့ ရုပ်ရှင်အတွက် ဇာတ်ညွှန်းရေးရတော့ ပြန်ထပ်မဖတ်တော့ပဲ သူ့မှတ်ဉာဏ်ထဲမှာ ရှိနေတဲ့အချက်တွေကိုပဲ အခြေခံပြီး သူ့စိတ်ကြိုက်ဖန်တီးမှုတွေနဲ့ဇာတ်ညွှန်းကို ရေးသားခဲ့တယ်။ ဒါကြောင့် စာအုပ်နဲ့ရုပ်ရှင်ဟာ အတော်လေးကို ကွဲလွဲနေခဲ့တယ်။ ထိုကွဲလွဲနေတဲ့အချက်တွေကို အောက်မှာ ကျွန်တော်နှိုင်းယှဉ်ပြပါ့မယ်။
သရုပ်ဆောင်တွေကတော့ Natalie Portman, Jennifer Jason Leigh, Benedict Wong, Gina Rodriguez, Tessa Thompson, Oscar Isaac နဲ့Tuva Novotny တို့က အဓိကဇာတ်ရုပ်တွေမှာ ပါဝင်ထားခဲ့ကြပါတယ်။
Annihilation ရုပ်ရှင်ဟာ ကံမကောင်းခဲ့ဘူးလို့ပဲပြောရမယ်။ ရုံတင်ဖို့ရက်ပိုင်းအနည်းငယ်အခန့်မှာ Paramount က Netflix ကို ရောင်းလိုက်တော့တယ်။ အဖြေကတော့ ရှင်းတယ်။ ဒီရုပ်ရှင်ဟာ ပရိသတ်အများစုအတွက် နားလည်ရ ခက်ခဲလိမ့်မယ် ဆိုတဲ့ အကြောင်းပြချက်နဲ့Cinematic ဆန်တဲ့ ရုပ်ရှင်တစ်ကားဟာ Television သာသာ အဆင့်ရှိတဲ့ Direct to Netflix အဆင့်ကို ရောက်ရှိသွားခဲ့တယ်။ Paramount ဟာ ပြီးခဲ့တဲ့ နှစ်က စီးပွားရေးအတော်လေး ထိခိုက်ခဲ့တယ်လို့ပြောလို့ရနိုင်တယ်။ သူထုတ်ခဲ့တဲ့ Baywatch တို့Transformers: The Last Knight တို့mother! တို့Ghost in the Shell တို့Suburbicon ဇာတ်ကားတွေအကုန်လုံး box office မှာ sales တွေကျခဲ့တယ်။ ပြောရမယ်ဆိုရင် ထိုဇာတ်ကားတွေ အကုန်လုံး အရှံးပေါ်ခဲ့တယ်။ အောင်မြင်သင့်သလောက် မအောင်မြင်ခဲ့ဘူး။ အဆိုးဆုံးကတော့ mother! ပါ။ ဒီတော့ ထုတ်လုပ်သူဖြစ်တဲ့ Paramount ဟာ ယခု Annihilation လည်း ထိုနည်း၎င်း သွားမယ်ဆိုတာ ကြိုသိနေတယ်။ ဘာကြောင့်လည်း ဆိုတော့ ရုပ်ရှင်ပရိသတ်အများစုဟာ သူတို့ကို အတွေးပေးတဲ့ရုပ်ရှင်တွေ၊ ideas တွေနဲ့ပြည့်နေတဲ့ ရုပ်ရှင်တွေ၊ သူတို့ရဲ့စဉ်းစားတွေးခေါ်နိုင်မှုတွေကို စမ်းသပ်လေ့ရှိတဲ့ဇာတ်ကားတွေကို မုန်းတီးကြတယ်။ အခု Annihilation ဇာတ်ကားဟာ သာမာန်ပရိသတ်တွေအတွက် မဟုတ်ခဲ့ဘူး။ ဒီလိုနဲ့America, Canada နဲ့China တို့၃ နိုင်ငံပဲ ရုံတင်ခဲ့ပြီး ကျန်တဲ့တစ်ကမ္ဘာလုံးအတွက် Netflix ကို ထိုးရောင်းလိုက်တော့တယ်။
ဟုတ်တယ်။ ဒီသတင်းကြားတဲ့အခါ ကျွန်တော်အပါအဝင် ကမ္ဘာအနှံ့က sci-fi ရုပ်ရှင်ချစ်သူတွေအတွက် ဒေါသတွေထွက်စေခဲ့တယ်။ ဒီရုပ်ရှင်ကို ရုံတင်စေချင်တယ်။ ရုံမှာကြည့်ရတဲ့ခံစားမှုမျိုးကိုပဲ လိုချင်တယ်။ ရုံမှာသွားကြည့်ပြီး ပေးလိုက်ရတဲ့ ပိုက်ဆံကိုပဲ ပေးချင်တယ်။ အိမ်မှာပဲထိုင်ပြီး computer screen ကဖြစ်ဖြစ် phone screen ကပဲဖြစ်ဖြစ် TV screen ကပဲဖြစ်ဖြစ် မကြည့်ချင်ခဲ့ကြဘူး။ ဒါပေမဲ့ ဘာတတ်နိုင်မှာလဲ။ သူရိုက်ကူးခဲ့တဲ့ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကို ရုံမတင်ပဲ Netflix ကိုရောင်းလိုက်တဲ့အတွက် Alex Garland ကိုယ်တိုင်လည်း အတော်လေးခံပြင်းခဲ့တယ်။ “We made the film for cinema.” ဆိုပြီး Netflix ကိုရောင်းလိုက်တဲ့အပေါ် သူ့ရဲ့ကောင်းကျိုးဆိုးကျိုးကို ပြောခဲ့တယ်။ ဒါပေမဲ့နောက်ဆုံးအနှစ်ချုပ်ကတော့
“So it's got pluses and minuses, but from my point of view and the collective of the people who made it – [it was made] to be seen onabig screen.”
ရုပ်ရှင်ပရိသတ်အများစုဟာ sci-fi လို့ပြောလိုက်ရင် superheroes ဇာတ်ကားတွေလောက်သာ တခဲနက်အားပေးတတ်ကြပြီး ယခုလို sci-fi အစစ်ဇာတ်ကားကောင်းတွေကို ကျော်သွားတတ်ကြတယ်။ မကြာသေးခင်နှစ်တွေက sci-fi တွေကို ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင် 2016 တုန်းက Arrival ၊ 2017 တုန်းက Blade Runner 2049 နဲ့အခု 2018 မှာ Annihilation လောက်ပဲ လူပြောများခဲ့တယ်။ ဒါပေမဲ့ ထိုဇာတ်ကားတိုင်းဟာ ဝင်ငွေအရ မအောင်မြင်ခဲ့ကြဘူး။ ပထမဆုံး ပြောချင်တာကတော့ ဒီဇာတ်ကားဟာ ခြောက်ခြားဖွယ်ကောင်းတဲ့ ဂြိုလ်သားဇာတ်ကား အမျိုးအစားမဟုတ်ဘူး။ သူတင်ပြချင်တဲ့ အကြောင်းအရာကို တဖြည်းဖြည်းနဲ့ဖော်ဖော်သွားတဲ့ ဇာတ်ကြောင်းပြောမျိုးနဲ့တင်ဆက်ထားတယ်။ ဒီရုပ်ရှင်ဟာ sci-fi ဇာတ်ကားအနေနဲ့အတော်လေး ကောင်းမွန်တဲ့ ဇာတ်ကားတစ်ကားဖြစ်တယ်။ sci-fi ဆိုတဲ့ရုပ်ရှင်အမျိုးအစားရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုတောင် နက်နက်နဲနဲ ဖွင့်ဆိုထားနိုင်လောက်တဲ့ ဇာတ်ကားမျိုးလို့တောင် ဆိုထိုက်တဲ့ ဇာတ်ကားမျိုး။ ရုပ်ရှင်ဟာ တစ်ခါတစ်ရံကြောက်မယ်ဖွယ်ကောင်သလို တစ်ခါတစ်ရံတွင်တော့ အလွန်တရာ လှပလွန်းနေပြန်တယ်။ ဒါပေမဲ့ တစ်ချိန်တည်းမှာပဲ ဇာတ်ဝင်ခန်းတိုင်းကတော့ ပရိသတ်ရဲ့သိလိုစိတ်ကို မြှင့်တင်ပေးနေပြန်တယ်။
အမြင်အာရုံပိုင်းအရဆိုရင် အရောင်ရွေးချယ်မှုတွေ လှပနေသလို shimmer ထဲက mutate ဖြစ်နေတဲ့ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ပိုင်းတွေကိုပြသတဲ့ အပိုင်းတွေမှာ အသေးစိပ်တင်ပြထားနိုင်ခဲ့တယ်။ Art direction ပိုင်းလည်း အာကောင်းတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်။ ဇာတ်ဝင်ခန်းတစ်ခုမှာ သေဆုံးနေတဲ့ လူသားတစ်ယောက်ရဲ ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့mutate ဖြစ်သွားတဲ့ ခန္ဓာကိုယ်အလောင်းကို တင်ပြထားတဲ့ အပိုင်းတွေဆို Alien ဇာတ်ကားတွေထက်တောင် ကျွန်တော်ပိုနှစ်သက်မိတယ်။ အသံပိုင်းကို ပရိသတ်တိုင်းအဓိကထားပြီး ကြည့်နေမယ်ဆိုရင် နောက်ဆုံးဇာတ်သိမ်းခန်းမှာ သုံးသွားတဲ့ အသံတွေဟာ ကျွန်တော့်ကိုအခုထိ ခြောက်ခြားနေမိတုန်းပဲ။ ထိုဇာတ်သိမ်းခန်းကို ကြည့်နေစဉ်အတွင်း ကြားခဲ့ရတဲ့ အသံပိုင်းဟာ ကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်တွေကိုပါ ကမောက်ကမဖြစ်စေခဲ့ပြီး ထိုမီးပြတိုက်ထဲက ကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်တွေကို ထိုဇာတ်ဝင်ခန်းထဲကနေ ထွက်ခွာသွားလို့မရအောင်ကို လှောင်ပိတ်မိသလို ခံစားခဲ့ရတယ်။
Annihilation ဇာတ်ကားဟာ Action ထက် Metaphors တွေပိုမိုများပြားနေခဲ့ပါတယ်။ ထို Metaphors တွေအကြောင်းကိုလည်း ကျွန်တော်အောက်မှာ ဆက်ရှင်းပါမယ်။ ဇာတ်လမ်းရဲ့ဇာတ်သိမ်းကို ကြိုတင်ခန့်မှန်းနိုင်ဖို့ ကျွန်တော်တို့ကို ကြိုးစားခွင့်မပေးပဲ ဇာတ်ကားတစ်ကားလုံးဟာ ဇာတ်ကောင် Lean နဲ့ထိုအမျိုးသမီး ၅ ယောက်ရဲ့Shimmer ထဲကို ဝင်ရောက်သွားပြီးနောက်ပိုင်း ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ ခံစားချက်တွေနဲ့အမျိုးအမည်မသိတဲ့ ပြောင်းလဲချက်တွေကို လေးပင်စွာနဲ့တင်ပြထားခဲ့တယ်။ ဇာတ်ကားထဲမှာ အလွန်ခြောက်ခြားဖွယ် ကောင်းတဲ့ ဇာတ်ဝင်ခန်းတစ်ခန်းပါဝင်ခဲ့တယ်။ ထိုအခန်းဟာ သာမာန်အားဖြင့် ပြန်ပြောကြည့်မယ်ဆိုရင် ရယ်စရာတောင် ကောင်းနေခဲ့တယ်။ ဒါပေမဲ့ ဇာတ်ကားက တင်ပြချက်တွေနဲ့ဇာတ်ကောင်တစ်ယောက်ရဲ့စကားပြောတွေနဲ့တင် ထိုဇာတ်ဝင်ခန်းဟာ အလွန်ကို ခြောက်ခြားဖွယ်အတိ ဖြစ်လာခဲ့တယ်။ (ဟုတ်ပါတယ်။ ဝက်ဝံ ဇာတ်ဝင်ခန်းပါ။)
သရုပ်ဆောင်တွေအပိုင်းကို ပြောရမယ်ဆိုရင် Natalie Portman က စိတ်ဓာတ်အင်အားသန်မာတဲ့ အကြောက်အရွံ့မရှိတဲ့ ဇာတ်ကောင်အဖြစ် မယုံကြည်နိုင်ဖွယ်ကောင်းစွာ သရုပ်ဆောင်နိုင်ခဲ့တယ်။ သူ့ဇာတ်ကောင်ရဲ့အိမ်ထောင်ရေးပိုင်းနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ ဇာတ်ဝင်ခန်းတွေမှာလည်း ပျော့ပြောင်းစွာ သရုပ်ဆောင်နိုင်ခဲ့တယ်။ ဒီ့အတွက်ကြောင့် သူမရဲ့ဇာတ်ကောင်ဟာ ဇာတ်ကားရဲ့ခံစားချက်အတွက် ဗဟိုအဖြစ်ဦးတည်ထားခဲ့ခြင်းပါ။ Jennifer Jason Leigh ကတော့ Psychologist ဆိုတဲ့အတိုင်း လျှို့ဝှက်နည်းနဲလွန်းတဲ့ ဇာတ်ကောင်စရိုက်ကို ပေါ်လွင်အောင် သရုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်။ ကျွန်တော်အကြိုက်ဆုံးကတော့ Gina Rodriguez ပါ။ ဇာတ်ကောင်စရိုက်အပြောင်းအလဲကို တစ်ကားလုံးမှာ သူ့ဇာတ်ကောင်မှာပဲ ကျွန်တော်တို့တွေ့ခဲ့ရတယ်။
Difference between Book and Movie
ယခုရုပ်ရှင်ဟာ စာရေးဆရာ Jeff Vandermeer ရဲ့Annihilation ဆိုတဲ့စာအုပ်ကိုမှီငြမ်းထားတယ်ဆိုပေမဲ့ အခြေခံအကြောင်းအရာလောက်ပဲ တူညီပြီး ဇာတ်ကြောင်းခေါ်ဆောင်သွားပုံခြင်းဟာ အလွန်ကွဲပြားခြားနားပါတယ်။ ကျွန်တော်အစကပြောထားသလိုပဲ။ Alex Garland က သူစာအုပ်ကို အစကတည်းက ဖတ်ထားခဲ့ပေမဲ့ ရုပ်ရှင်ရိုက်ဖို့ကမ်းလှမ်းခံရတော့ ထိုစာအုပ်ကိုပြန်မဖတ်တော့ပဲ သူ့မှတ်ဉာဏ်ထဲမှာ မှတ်မိတဲ့အရာတွေအပေါ်မှာ ကွန့်ပြီး သူဖန်တီးချင်တဲ့ ဇာတ်ကြောင်းကို ရေးသားလိုက်တော့တယ်။ ဘာတွေကွဲပြားသလဲဆိုတာ အကြောင်းအရာတစ်ခုခြင်းစီနဲ့ယှဉ်ကြည့်ပြီး ပြောကြည့်ရအောင်။ ဒီနေရာကနေစပြီးတော့ ဇာတ်လမ်းရဲ့Spoilers တွေစပြောတော့မှာ ဖြစ်တဲ့အတွက် Spoilers တွေရှောင်ချင်တဲ့သူတွေကို အသိပေးလိုက်ပါပြီ။
Area X နဲ့Shimmer
ရုပ်ရှင်ထဲမှာ Area X ဆိုတာ ထိုဒေသကြီးရဲ့ပြင်ပက နေရာတစ်ခု။ ထိုဒေသကို လေ့လာနေတဲ့ အစိုးရနဲ့သိပ္ပံပညာရှင်တွေရဲ့အခြေစိုက်ရာ ဌာနကို Area X လို့ခေါ်ကြတယ်။ နယ်နမိတ်အဖြစ် မြင်တွေ့နေရတဲ့ တောက်ပတဲ့ အရောင်မျိုးစုံနဲ့ပြေးနေတဲ့ နံရံကြီးသဘောမျိုး အရောင်လွှာတွေထဲက ထိုထူးဆန်းတဲ့ ဒေသကို Shimmer လို့ခေါ်ကြတယ်။ ထို Shimmer ကြီးဟာ တဖြည်းဖြည်းနဲ့ကျယ်ပြန့်လာတယ်လို့ရှင်းပြထားတယ်။ ဒါပေမဲ့ စာအုပ်ထဲမှာတော့ ထို အရောင်တွေနဲ့နံရံအလွှာကြီး Shimmer မရှိဘူး။ ထိုဒေသကို Area X လို့ပဲ အသိများကြတယ်။ စာအုပ်ထဲမှာ Shimmer ဆိုတဲ့ ဝေါဟာရ တစ်ခုမှတောင် မပါခဲ့ဘူး။ နောက်တစ်ချက်က ရုပ်ရှင်ထဲမှာ ထို Area X ပေါ်ပေါက်လာတာ လွန်ခဲ့တဲ့3နှစ်ကျော်လောက်က ဆိုပေမဲ့ စာအုပ်ထဲမှာတော့ ထိုဒေသကြီးပေါ်လာတာ နှစ်ပေါင်း 30 ကျော်နေပါပြီ။ ထို့အပြင် ရုပ်ရှင်ထဲမှာ ထိုဒေသအကြောင်းကို လူထုကို အသိမပေးထားပေမဲ့ စာအုပ်ထဲမှာတော့ ထိုဒေသကြီးဟာ ပြည်သူလူထုတွေကြားထဲမှာလည်း အပြောများနေတဲ့ ဒေသတစ်ခုဖြစ်နေပြီ။
ရုပ်ရှင်ထဲမှာ Natalie Portman ရဲ့ဇာတ်ကောင် Lena ရဲ့ထို Shimmer ကြီးထဲကို မဝင်ရောင်ခင်က ဘဝတွေကို စပြခဲ့တယ်။ သူမဟာ John Hopkins ဆေးတက္ကသိုလ်ရဲ့lecturer တစ်ယောက်အဖြစ် ပရိသတ်တွေကို စတင်ပြသခဲ့တယ်။ ဒါပေမဲ့ စာအုပ်ထဲမှာတော့ ဇာတ်လမ်းစစချင်းမှာကတည်းက ထိုဇာတ်ကောင်ဟာ ထို Area X ဆိုတဲ့ဒေသကြီးထဲကို ရောက်ရှိနေပြီ။ သူမကပဲ ဇာတ်ကြောင်းကို ပြောဆိုသွားတဲ့ ဇာတ်ကြောင်းပြောခြင်းကို စာအုပ်ထဲမှာ ရေးဖွဲ့ခဲ့တယ်။
ရုပ်ရှင်ထဲမှာ The Tower ဆိုတဲ့အရာကို ပရိသတ်တွေ မတွေ့ခဲရဘူး။ ဒါပေမဲ့ စာအုပ်ထဲမှာတော့ The Tower ဆိုတဲ့အရာဟာ အလွန်ကို အရေးပါတဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခု ဖြစ်ခဲ့တယ်။ စာအုပ်ထဲမှာ တစ်ခြားဇာတ်ကောင်တွေက ထိုအရာကို The Tunnel လို့မြင်ကြပေမဲ့ အဓိကဇာတ်ကောင်ကတော့ The Tower အဖြစ်နဲ့ပဲ မြင်ခဲ့တယ်။ ထိုအထဲမှာ အလွန်ကို ကြောက်မက်ဖွယ်ကောင်းတဲ့ အရာတစ်ခုကို သူတို့တွေ့ခဲ့တယ်။ ထိုအရာဟာ မြေတွင်းတစ်ခုသဏ္ဍာန်မျိုးပါ။ မြေကြီးပေါ်ကနေ မြေအောက်ထဲကို ဆင်းသွားရတဲ့ အဆောက်အဦးတစ်ခု။ လှေကားတွေရှိပြီး နံရံတွေပေါ်မှာ နားလည်ရခက်ခဲတဲ့ ဘာသာစကားတစ်မျိုးနဲ့ရေးထားတဲ့ စာကြောင်းတွေ ရှိနေတယ်။ ဒါပေမဲ့ ထိုစာတွေကို မှင်တွေနဲ့ရေးသားထားတာမျိုးမဟုတ်ပဲ အပင်တွေနဲ့ရေးသားထားတာ။ ထိုစာတွေကို ရေးသားခဲ့တဲ့သူဟာ စာအုပ်ထဲက အခေါ် The Crawler ဆိုတဲ့သတ္တဝါတစ်ကောင်ပဲ ဖြစ်တယ်။
ရုပ်ရှင်ထဲမှာ ထိုအဖွဲ့ဟာ ဒုတိယမြောက် ထိုဒေသကြီးထဲကို ဝင်ရောက်ခဲ့တဲ့ အဖွဲ့ဖြစ်တယ်။ သူတို့ရှေ့က သွားခဲ့တဲ့ အဖွဲ့ကတော့ စစ်သားတွေဖြစ်ပြီး ယခု သူတို့အဖွဲ့ကတော့ သိပ္ပံပညာရှင်တွေဖြစ်တဲ့ အမျိုးသမီးတွေချည်းပဲ ဖြစ်နေခဲ့တယ်။ ထိုအမျိုးသမီးတွေရဲ့နာမည်တွေကတော့ Lena (Biologist), Ventress (Psychologist), Anya Thorensen (Paramedic), Josie Radek (Physicist) နဲ့ Cass Sheppard, (Surveyor) ဆိုပြီး အမည်တွေပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ စာအုပ်ထဲမှာတော့4ယောက်ပဲ ဖော်ပြခဲ့တယ်။ biologist ရယ် Psychologist ရယ် Surveyor ရယ် Anthropologist ရယ်ဆိုပြီး4ယောက်ပဲ ပါခဲ့တယ်။ ကျန်တဲ့ တစ်ယောက်ကတော့ Linguist တစ်ယောက် ဖြစ်ပေမဲ့ Mission မစခင်ကတည်းက ကျန်နေရစ်ခဲ့တယ်လို့ပြောထားတယ်။ စာအုပ်ထဲမှာ ထူးခြားချက်က ဇာတ်ကောင်တစ်ယောက်ကိုမှ အမည်နာမ မဖော်ပြခဲ့ဘူး။ အဓိကဇာတ်ကောင်ကိုတောင် ကျွန်တော်တို့တွေ Biologist လို့ပဲ သိခဲ့ရတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ကျွန်တော်တို့ဖတ်ခဲ့ရတာက သူမရေးသားခဲ့တဲ့ Mission Journal တွေဆီကနေ ပြန်ဖတ်နေရတာ ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပါ။ စာအုပ်ထဲမှာ ထို Mission တွေကို ထွက်လာတဲ့ သူအချင်းချင်း personal info တွေ မ share ခိုင်းခဲ့ဘူး။ ဒါကြောင့် သူတို့တွေအနေနဲ့တစ်ယောက်ကို တစ်ယောက် နာမည်တွေနဲ့မသိခဲ့ကြပဲ မိမိလုပ်ကိုင်တဲ့ အလုပ်အခေါ်အဝေါ်နဲ့ပဲ တစ်ယောက်ကို တစ်ယောက် သိခဲ့ကြတယ်။ စာအုပ်ထဲမှာ သူတို့တွေရဲ့ကံကြမ္မာဟာလည်း ရုပ်ရှင်ထဲကနဲ့မတူညီခဲဘူး။ သူတို့တွေရဲ့အဆုံးသတ်ကံကြမ္မာတွေကိုတော့ ကျွန်တော်မပြောတော့ပဲ ချန်ရစ်ထားခဲ့တော့မယ်။ စာအုပ်နဲ့မတူတဲ့ ရုပ်ရှင်ထဲက အချက်တစ်ခုကတော့ ရုပ်ရှင်ထဲက ဇာတ်ကောင်တွေအကုန်လုံးဟာ ယခု Shimmer ဒေသထဲကို ဝင်ရောက်လာခဲ့တာ ကိုယ်ပိုင် အသီးသီးရည်ရွယ်ချက်တွေ ရှိခဲ့ကြတယ်။ ရုပ်ရှင်ထဲမှာ သူတို့ဟာ ဒုတိယမြောက် အဖွဲ့ဖြစ်ပေမဲ့ စာအုပ်ထဲမှာတော့ သူတို့ဟာ 12 ခုမြောက် အဖွဲ့ပဲ ဖြစ်နေတယ်။ သူတို့ရှေ့မှာ အဖွဲ့၁၁ ဖွဲ့က ဝင်ရောက်ခဲ့တယ်။ ပထမအဖွဲ့က ဘာမှ မဖြစ်ခဲ့ဘူး။ ဒုတိယအဖွဲ့ကတော့ မိမိကိုယ်ကို သတ်သေခဲ့ကြတယ်။ တတိယအဖွဲ့ကတော့ တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက် သတ်ခဲ့ကြတယ်။ နောက်ပိုင်းအဖွဲ့တွေဟာ ဘာမှ ဆိုးဆိုးရွားရွားကြီး မဖြစ်ခဲ့ကြပေမဲ့ တစ်ချို့က ပြန်မလာခဲ့ပဲ ပျောက်ဆုံးခဲ့ကြတယ်။ တစ်ချို့ကတော့ ပြန်လာနိုင်ကြတယ်။ ဒါပေမဲ့ ပြန်လာနိုင်တဲ့ သူတွေအကုန်လုံးကလည်း cancer ရောဂါတစ်ခုခုနဲ့နောက်6လလောက်အခန့်မှာ သေဆုံးသွားကြတယ်။
Mutated Animals/ Mutations
ရုပ်ရှင်ထဲမှာ ကျွန်တော်တို့တွေ့ခဲ့ရတဲ့ ပုံစံတွေပြောင်းလဲနေတဲ့ မိကျောင်းတို့၊ ဝက်ဝံကြီးတို့၊ လူသားအပင်တွေတို့ဆိုတာ စာအုပ်ထဲမှာ မပါဝင်ခဲ့ဘူး။ ရုပ်ရှင်ထဲမှာ ထိုအရာတွေ ထည့်ခဲ့လို့ပဲ ပိုမိုစိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းပြီး အလွန်ကြောက်မက်ဖွယ်ကောင်းတဲ့ ဝက်ဝံကြီး ဇာတ်ဝင်ခန်းကို ထည့်သွင်းနိုင်ခဲ့တာပေါ့။
Kane (The Husband)
စာအုပ်ထဲမှာ Biologist ရဲ့ခင်ပွန်းဖြစ်သူဟာ ဇာတ်လမ်းမစတင်ခင်ကတည်းက သေဆုံးနေခဲ့ပြီဖြစ်တယ်။ ဒါပေမဲ့ ရုပ်ရှင်ထဲကလိုပဲ သူပြန်လာခဲ့တယ်။ ဒါပေမဲ့ အရင်လိုတက်ကြွတဲ့ သူတစ်ယောက်မဟုတ်တော့ဘူးဆိုတာ တင်ပြထားတယ်။ ထို့နောက်6လလောက်ကြာတဲ့အခါ cancer ရောဂါနဲ့သေဆုံးသွားခဲ့တယ်။ ဒါကြောင့် Biologist က ယခု Area X ထဲကို ဝင်ရောက်ဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တာလို့ရေးသားထားတယ်။ ဒါပေမဲ့ ထိုအရာတွေအကုန်လုံးက flashbacks တွေမှာပဲ ရေးထားတာ ဖြစ်တယ်။ ဒါပေမဲ့ ရုပ်ရှင်ထဲမှာတော့ Lena ရဲ့ခင်ပွန်းဖြစ်သူ Kane ဟာ Shimmer ကြီးထဲမှာပဲ ကိုယ့်ကိုကိုယ် သတ်သေသွားပြီး သူ့ရဲ့duplicate နောက်တစ်ယောက်က ပြန်လာခဲ့တယ်လို့ဇာတ်လမ်းမှာ တင်ပြထားတယ်။ ဒါပေမဲ့ ရုပ်ရှင်ထဲမှာလိုပဲ စာအုပ်ထဲက ပြန်လာတဲ့ ခင်ပွန်းဖြစ်သူဟာ duplicate ဖြစ်ရင်ဖြစ်လောက်မယ်။ စာအုပ်ထဲမှာ သူမ မီးပြတိုက်ရောက်သွားတော့ သူမခင်ပွန်းရေးသားခဲ့တဲ့ Journal ကို တွေ့ခဲ့ရတော့ အသက်ရှင်နေသေးတယ်လို့သူမယုံကြည်ခဲ့တယ်။
Lena and Her Mission
စာအုပ်ထဲက Biologist ဟာ ကျွန်တော် စောစောက ပြောပြထားတွေကို ဖတ်လိုက်ရင် သူမရဲ့အကြောင်းကို သိနေလောက်ပါပြီ။ စာအုပ်ထဲမှာ သူမရဲ့ငယ်ဘဝအကြောင်းတွေကိုလည်း ရေးဖွဲ့ထားသလို သူမ Thesis လုပ်ခဲ့တုန်းက မြို့လေးတစ်မြို့မှာ သွားနေခဲ့စဉ်က အဖြစ်အပျက်တွေကိုလည်း ပြောပြထားတယ်။ ဒါပေမဲ့ ရုပ်ရှင်ထဲမှာတော့ သူမရဲ့ငယ်ဘဝတွေကို မပြသထားဘူး။ ထို့အစား သူမရဲ့အပြစ်တစ်ခုကို ဖော်ပြထားတယ်။ သူမခင်ပွန်းဖြစ်သူ Kane စစ်မှုထမ်းနေစဉ် အဝေးရောက်နေခိုက်တွေမှာ သူမဟာ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက် အမျိုးသားတစ်ယောက်နဲ့အိပ်ယာပေါ်မှာ ဖောက်ပြန်လေ့ရှိတယ်။ ကြာလာတော့ ထိုအရာကို သူမလည်း မုန်းတီးလာတယ်။ သူမဖောက်ပြန်နေတာကိုလည်း Kane တစ်ယောက် ရိပ်မိနေခဲ့တယ်။ ဒါပေမဲ့ ဘာမှမပြောခဲ့ဘူး။ မသိချင်ယောင်ပဲ ဆောင်နေခဲ့တယ်။ ဒီစိတ်တွေကြောင့်ပဲ Shimmer ထဲကို ဝင်ရောက်ဖို့Kane ဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်။ ဒါနဲ့ပဲ Kane ဟာ မိမိကိုယ်ကို သတ်သေပြီး သူ့ရဲ့Duplicate ကို Lena ဆီကို သွားဖို့စေလွှတ်ခဲ့တယ်။ Lena ဟာလည်း သူမရဲ့အမှားတွေကို ပေးဆပ်ဖို့နဲ့သူမရဲ့ခင်ပွန်းဖြစ်သူ သွားခဲ့ရတဲ့ ခရီးနဲ့အတွင်းစိတ်ကို သိဖို့Shimmer ထဲကို ဝင်ဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တာ။
စာအုပ်ထဲမှာ အိပ်မွေ့ချခြင်းအကြောင်းအရာဟာ အလွန်အရေးပါတဲ့အချက်တစ်ခု ဖြစ်ခဲ့တယ်။ Psychologist ဟာ သူမခိုင်းချင်တဲ့အရာတွေကို အိပ်မွေ့ချခြင်းနဲ့အသုံးပြုပြီး တစ်ခြားသူတွေကို ခိုင်းစေခဲ့တယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ထို Area X ဆိုတဲ့ဒေသကြီးဟာ သာမာန်လူသားတွေရဲ့စိတ်တွေကို ပြောင်းလဲစေတတ်တာကြောင့် ထိုစိတ်တွေကို ထိန်းချူပ်နိုင်ဖို့Psychologist ကိုထည့်ခဲ့တာ ဖြစ်တယ်။ ဒါပေမဲ့ စာအုပ်ထဲမှာ Psychologist ဟာ Biologist ကို အိပ်မွေ့မချနိုင်ခဲ့ဘူး။ ထိုအချက်တွေဟာ ရုပ်ရှင်ထဲမှာ လုံးဝထည့်သွင်းမဖော်ပြထားတဲ့အချက်တွေပဲ ဖြစ်တယ်။
The Ending (Annihilation)
ရုပ်ရှင်ထဲမှာ Lena ဟာ အဆုံးသတ်မှာ Annihilation ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကို သိခဲ့တယ်။ သူမရဲ့Duplicate ကိုလည်း အဆုံးသတ်နိုင်ခဲ့တယ်။ ထို့နောက် Shimmer ကြီးတစ်ခုလုံးကိုလည်း ဖျက်ဆီးပြီး သူမ Area X ကို ပြန်လာနိုင်ခဲ့တယ်။ ဒါပေမဲ့ သူမကိုယ်တိုင် သူမအစစ် ဟုတ်ချင်မှ ဟုတ်တော့မယ်။ သူမလက်မှာ အရင်ကမရှိခဲ့တဲ့ ဆေးမှင်ကြောင်တစ်ခု ရှိနေခဲ့တယ်။ အဆုံးမှာ Kane က “Are you Lena” လို့မေးတော့ ပြန်မဖြေခဲ့ပဲ မျက်လုံးအရောင် ပြောင်းလဲသွားတာ ကျွန်တော်တို့ပရိသတ်တွေ တွေ့ခဲ့ရတယ်။ ဒါပေမဲ့ စာအုပ်ထဲမှာတော့ Biologist ဟာ နောက်ဆုံးမှာ ပြင်ပကမ္ဘာကို ပြန်မလာခဲ့တော့ဘူး။ သူမရေးသားနေတဲ့ Journal ကိုလည်း တစ်ခြားအရှေ့က လူတွေလိုပဲ မီးပြတိုက်ရဲ့အောက်က အခန်းလေးထဲမှာ ထည့်ထားခဲ့တော့တယ်။ သူမရဲ့ခင်ပွန်းဖြစ်သူ ဘာဖြစ်ခဲ့သလဲဆိုတာ သူမသေချာမသိခဲ့ရဘူး။ ဒါကြောင့် ထို မီးပြတိုက်ရဲ့အလွန် ခရီးကို ဆက်သွားဖို့သူမဆုံးဖြတ်ချက်ချခဲ့တာနဲ့အဆုံးသတ်ထားခဲ့တယ်။ ဇာတ်ကားထဲက Annihilation ဆိုတာ လက်ရှိ သက်ရှိမျိုးနွယ်စုတွေကို ရည်ရွယ်တာ ဖြစ်ပေမဲ့ စာအုပ်ထဲက Annihilation ဆိုတာကတော့ ခရီးစဉ်အတွင်း ဆိုးရွားတဲ့အရာတစ်ခုခု ဖြစ်ပေါ်လာပါက မိမိကိုယ်ကို သတ်သေရန် Psychologist က ကျန်တဲ့သူတွေကို အိပ်ငွေ့ချပြီး ပြောမဲ့ စကားပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီဇာတ်ကား ကြည့်ပြီးသွားတဲ့အခါ ပရိသတ်အများစုမှာ မေးခွန်းတွေ အသီးသီးကျန်ခဲ့ကြတယ်။ ကျွန်တော့်အမြင်မှာတော့ အရမ်းခက်ခဲလွန်းတဲ့အရာတွေလို့မမြင်မိဘူး။ ဥပမာ 2001: A Space Odyssey တို့ဘာတို့အဆုံးသတ်ဆိုရင် ကျွန်တော်အခုထိ နားမလည်သေးဘူး။ ရှင်းပြထားတဲ့ အချက်တွေကိုလည်း လက်မခံနိုင်သေးဘူး။ အခုကျွန်တော် ဆက်ပြောချင်တာက ဇာတ်ကားထဲက အချက်တစ်ချို့ကို ပြန်ရှင်းဖို့ပါ။
ဇာတ်ကားရဲ့တစ်နေရာရောက်တဲ့အခါ အိမ်တစ်အိမ်ကို သူတို့တွေ့တယ်။ ထိုအိမ်ဟာ Lena နဲ့ခင်ပွန်းဖြစ်သူ Kane တို့ရဲ့အိမ်နဲ့တစ်ပုံစံတည်းပဲ။ ဒါဘာကြောင့်လဲ။ အမှန်က Shimmer ထဲကို ဝင်ရောက်လာတဲ့ သူတွေတိုင်းဟာ ပြောင်းလဲလာကြတယ်။ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရော ခန္ဓာဗေဒပိုင်းဆိုင်ရာရော။ ပြီးတော့ cells တွေ မျိုးပွားပြီး ပုံစံတူတွေ ခွဲထွက်လာတယ်။ ကျွန်တော့်အမြင်မှာ DNA တွေပါ duplicate ဖြစ်တာ မဟုတ်ပဲ မှတ်ဉာဏ်တွေပါ duplicate ဖြစ်လာတာလို့မြင်တယ်။ ထိုအိမ်က Kane ရဲ့Memories တွေထဲကနေ ကျန်ခဲ့တာ။
ဇာတ်ကားရဲ့တစ်နေရာမှာ Lena က သမင်နှစ်ကောင်ကို တွေ့လိုက်ရတယ်။ တစ်ကောင်က ညှိုးနွမ်းနေပြီး နောက်တစ်ကောင်ကတော့ သစ်လွင်တောက်ပနေတယ်။ ဒါကြောင့် ကျွန်တော့်အမြင်မှာ Lena ပြောသလိုပဲ။ Shimmer က ကမ္ဘာကြီးကို ဖျက်ဆီးနေတာ ဟုတ်ချင်မှဟုတ်မယ်။ Environment နဲ Nature ကို ပြောင်းလဲနေတာ သပ်သပ်ပဲ။
Shimmer နဲ့Lighthouse က အရာတွေကို ဘယ်သူကမှ ဖန်ဆင်းတယ်လို့ကျွန်တော်မမြင်ဘူး။ ဖန်ဆင်းတယ်ဆိုတာထက် Evolution တစ်ခုသပ်သပ်ပဲလို့ကျွန်တော်မြင်တယ်။ ပထမဆုံးဇာတ်ဝင်ခန်းမှာ အာကာသကနေ ဥက္ကာပျံသဘောမျိုး အရာတစ်ခု ကျလာတာကို ကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်။ ထိုအထဲကနေ ပါလာတဲ့ သဘာဝစွမ်းအားတစ်ခုကနေ Evolve ဖြစ်လာဖြင်းဆိုတာ ဒီဇာတ်ကားအပေါ် ကျွန်တော်မြင်တဲ့ အမြင်တစ်ခုပဲ။ ဒါကြောင့် ဘုရားသခင်တို့၊ ဖန်ဆင်းတယ်ဆိုတာတို့မရှိပဲ ကျွန်တော်တို့လူသားတွေရဲ့ အစမှကတည်းကလိုပဲ DNA တွေမျိုးပွားပြီး သတ္တကမ္ဘာတစ်ခု ဖြစ်လာတာ။ ဒါပေမဲ့ ပိုထူးခြားတာတစ်ခုက ထိုအထဲက သဘာဝစွမ်းအားတစ်ခုဟာ Organism တစ်ခုခု ဖြစ်ချင်ဖြစ်မယ်။
ထို Organism ဟာ သာမာန် evolution တွေလို cells တွေက မျိုးပွားလာခြင်း ဆိုတာထက် reverse engineering သဘောမျိုးကို ပိုရောက်တယ်။ cells တွေဟာ ပွားပွားလာတာထက် cells နှစ်ခုကို ပေါင်းစပ်ပြီး တစ်ခုတည်း သဘောမျိုး ဖြစ်သွားတာမျိုး။ နှစ်ခုထက် ပိုချင်ပိုမယ်။ cells ၄ မျိုး ၅ မျိုးကိုလည်း ပေါင်းစပ်ချင် ပေါင်းစပ်နိင်လိမ့်မယ်။ ပြီးတော့ တစ်ခုတည်း ဖြစ်သွားတာ။ အရာအားလုံးဟာ ပေါင်းစပ်လာမယ်။ ဒါပေမဲ့ အသက်ရှင်နိုင်တဲ့အရာကတော့ အသက်ဆက်ရှင်လိမ့်မယ်။ ဥပမာ မိကျောင်းလိုပေါ့။ ထိုမိကျောင်းဟာ တစ်ခြားသတ္တဝါတွေရဲ့cells တွေနဲ့ပေါင်းစပ်လာမယ်။ ဒါပေမဲ့ သူက ပိုပြီး surviving ဆက်လုပ်နိုင်တဲ့အတွက် သူကရပ်တည်နေလာတယ်။ သူနဲ့ပေါင်းစပ်ထားတဲ့ တစ်ခြား သတ္တဝါတွေရဲ့cells တွေကိုပဲ တွေ့ရပေမဲ့ ပုံပန်းသဏ္ဍာန်အရ မတွေ့ရတော့ဘူး။ အထူးသဖြင့် ဗိုက်ထဲက အူတွေဟာ ငါးရှဉ့်ကောင်တွေလို ဖြစ်လာတဲ့ စစ်သားဆိုရင် နောက်ဆုံး နံရံကြီးမှာ ကျွန်တော်တို့သူ့အလောင်းကို တွေ့တော့ သူဟာ လူသားနဲ့နံရံက ကျောက်တုံးတွေနဲ့ပေါင်းစပ်သွားတဲ့ အရာဖြစ်သွားတယ်။
ဆေးမှင်ကြောင် ကိစ္စဆက်ပြောကြရအောင်။ ပရိသတ်တစ်ချို့ကသတိထားမိကြမှာပါ။ Lena ရဲ့လက်ပေါ်က ဆေးမှင်ကြောင်တစ်ခုကို။ သူမ Shimmer ထဲကို မဝင်ခင်က မရှိသေးဘူး။ ဒါပေမဲ့ ပြန်လာတော့ သူမလက်မှာ ထိုဆေးမှင်ကြောင်ပါလာတယ်။ ထိုဆေးမှင်ကြောင်ကို Anya (Paramedic) ရဲ့လက်မှာလည်း ကျွန်တော်တို့တွေ့ခဲ့ရသလို သေဆုံးသွားတဲ့ စစ်သားရဲ့လက်မှာလည်း ကျွန်တော်တို့တွေ့ခဲ့ရတယ်။ ဘယ်သူ့ဆီကနေ ဘယ်သူရခဲ့တာလည်း ဆိုတာတော့ ပြောဖို့ခက်တယ်။ ထို Tattoo ကို သေချာကြည့်မယ်ဆိုရင် မြွေတစ်ကောင်ဟာ သူ့ကိုယ်သူပြန်မြို နေတာကို တွေ့ရတယ်။ ဘာပုံသဏ္ဍာန်နဲ့တူသွားလည်းဆိုတော့ သင်္ချာဘာသာရဲ့သင်္ကေတတွေထဲက Infinity ရဲ့သင်္ကေတဖြစ်တဲ့ ∞ နဲ့သွားတူနေတယ်။ ဘာလည်း ဆိုတော့ သေခြင်းတရားကနေ ရှင်သန်ခြင်းတရားကို ဆက်သွားခြင်းတွေ၊ ယိုယွင်းပျက်စီးခြင်းတွေကနေ အသစ်ပြန်လည်ဖြစ်ပေါ်ခြင်းကို ဦးတည်ဖြင်းတွေပဲ။ ထိုအရာတွေကိုပဲ ထို organism က ပြုလုပ်နေတာ ဖြစ်တယ်။
ဇာတ်လမ်းရဲ့အဆုံးသတ်ကို ဆက်ပြောကြတာပေါ့။ ဇာတ်လမ်းအဆုံးမှာ Lena ဟာ မီးပြတိုက်ကို ရောက်ခဲ့တယ်။ ထို့နောက် အလောင်းတစ်ခုကို တွေ့ခဲ့ရပြီး video camera လေးတစ်ခုကို တွေ့ရတယ်။ Video ထဲမှာ သူမခင်ပွန်း Kane အစစ်တစ်ယောက် phosphorous ဗုံးနဲ့ခွဲပြီး မိမိကိုယ်ကိုသတ်သေသွားတာ တွေ့ခဲ့ရတယ်။ နောက်တော့ Kane ရဲ့duplicate က ထွက်သွားတယ်။ (ဒါကြောင့် ကျွန်တော့်အမြင်မှာ Kane ဟာ Lena ဒီ Shimmer ထဲကို လာခဲ့အောင် တမင်လုပ်ခဲ့တာလို့မြင်တယ်။)
ထို့နောက် Lena ဟာ မီးပြတိုက်ရဲ့အောက်ကို ဆင်းသွားတော့ Psychologist Ventress ကိုတွေ့လိုက်တယ်။ Ventress ဟာ Annihilation လို့ပဲပြောသွားပြီး သူမကိုယ်သူမ အဆုံးသတ်သွားတယ်။ ထို့နောက် ထူးဆန်းတဲ့ မီးတန်းလို အရာတွေထဲကနေ Lena ရဲ့မျက်နှာပေါ်က သွေးတစ်စက်နဲ့Mutate လုပ်ထားတဲ့ အရာတစ်ခု ထွက်လာတယ်။ ထို duplicate နဲ့Lena တိုက်ခိုက်လို့အပြီးမှာ ထို duplicate ရဲ့လက်ထဲကို phosphorous ဗုံးတစ်ခု ထည့်ထားပေးခဲ့လိုက်တယ်။ နောက်ဆုံးအရာအားလုံး မီးလောင်ပြီး ပျက်စီးသွားတယ်။ Shimmer ကြီးလည်း ပျောက်ဆုံးသွားတယ်။ Lena လည်း Area X ကိုပြန်ရောက်လာတယ်။ သူမခင်ပွန်းကို “You’re not Kane, are you?” လို့မေးတော့ ထို Kane ရဲ့duplicate က “I don’t think so. Are you Lena” လို့ပြန်မေးတော့ ပြန်မဖြေခဲ့ပဲ Lena မျက်လုံးအရောင်ပြောင်းသွားတာနဲ့ဇာတ်သိမ်းခဲ့တယ်။ ကျွန်တော့်အမြင်မှာ Lena လည်း duplicate ဖြစ်သွားတဲ့အခါ ဘယ်ဟာအစစ် ဘယ်ဟာအတုဆိုတာ ရှိချင်မှ ရှိတော့မယ်။ သူမဟာ ထို Shimmer ထဲက တစ်ခြားမျိုးစိတ်တွေနဲ့ပေါင်းစပ်ပြီး ပေါင်းစပ်သား ဖြစ်မယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်။ ဒီတော့ ပြန်လာတဲ့ Lena ဟာ အစစ်တွေ၊ အတုတွေဟာ အရေးမကြီးတော့ဘူး။ သူမဟာ Shimmer ရဲ့effects တွေကို ရခဲ့ပြီး ဖြစ်တယ်။
ဇာတ်ကားထဲမှာ မေ့လို့ မရတဲ့ ဇာတ်ဝင်ခန်းတစ်ခု ရှိခဲ့တယ်။ အခုထိ ခေါင်းထဲကနေ ထုတ်လို့မရသေးတဲ့ ဇာတ်ဝင်ခန်းတစ်ခု။ တစ်ညမှာ Cass Sheppard ဆိုတဲ့ Surveyor ကို ဝက်ဝံတစ်ကောင် တိုက်ခိုက်ပြီး ဆွဲသွားတယ်။ သူမ မသေခင်မှာ “help me..” ဆိုတဲ့ စကားလေးပဲ အော် အော် ပြောသွားနိုင်တော့တယ်။ ထိုအရာကို ဝက်ဝံတစ်ကောင်ဆိုတာ Lena နဲ့Ventress ပဲ မြင်လိုက်ရတယ်။ နောက်နေ့မနက်မှာတော့ Cass ရဲ့အလောင်းကို Lena တစ်ယောက် တွေ့ခဲ့တယ်။ ဒါပေမဲ့ ထိုညသူတို့အိမ်လေးထဲမှာ အချင်းချင်းအဆက်မပြေ ဖြစ်နေချိန်မှာ ရုတ်တရက် အိမ်အပြင်ဘက်ကနေ Cass ရဲ့အသံနဲ့”help me..” ဆိုတဲ့ အသံကြားရတော့ အဖွဲ့သားအချင်းချင်း မယုံသင်္ကာဖြစ်နေတဲ့ Anya (Paramedic) တစ်ယောက်က ကူညီဖို့ပြေးထွက်သွားတယ်။ ဒါပေမဲ့ အိမ်ထဲကို ဝင်လာတဲ့ သတ္တဝါဟာ Cass တစ်ယောက် မဟုတ်ပဲ Cass ရဲ့အသံနဲ့ပြောနေတဲ့ Cass ကို သတ်သွားတဲ့ ဝက်ဝံကြီးဖြစ်နေတယ်။ ထိုဝက်ဝံကြီးရဲ့မျက်နှာဟာ အရေပြားတွေကွာနေပြီး အသားထဲက အရိုးတွေက မျက်နှာပြင်ရှေ့ကို ငောထွက်နေတယ်။
နောက်တစ်နေ့မနက်မှာ Lena နဲ့Josie ပဲ ကျန်ရစ်ခဲ့တော့ Josie ပြောခဲ့တဲ့ စကားတစ်ခွန်းက ထိုဇာတ်ဝင်ခန်းကို ပိုမိုကြောက်ရွံ့စေခဲ့တယ်။
“မနေ့ညက Sheppard ရဲ့အသံကို ကြားရတာ ထူးဆန်းလွန်းတယ်။ သူမသေဆုံးခါနီးမှာ သူမရဲ့စိတ်အပိုင်းအစလေးတစ်ခုဟာ သူမရဲ့အသက်ကိုချွေခဲ့တဲ့ သတ္တဝါကြီးရဲ့စိတ်အပိုင်းအစတစ်ခု ဖြစ်သွားတာလို့ကျွန်မယူဆမိတယ်။ ဒါဟာ ကြောက်ဖို့ကောင်းတဲ့ အတွေးတစ်ခုပဲ။ သေခါနီးမှာ ဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့ ကြောက်ရွံ့စိတ်ရယ်၊ နာကျင်မှုတွေရယ်.. မင်းခန္ဓာထဲက ဒါတွေပဲ နောက်ဆုံးအသက်ရှင် ကျန်ရစ်ခဲ့တော့တယ်။ တရိစ္ဆာန်တစ်ကောင်ရဲ့အတွင်းစိတ်ထဲမှာ လှောင်ပိတ်မိသွားပြီးတော့..”
ကျွန်တော်တို့သေခါနီးအတွေးတွေဟာ အရေးကြီးတယ်လို့ကြားဖူးတယ်။ ဟုတ်ချင်လည်း ဟုတ်မယ်။ မဟုတ်ချင်လည်း မဟုတ်ဘူး။ နောင်ဘဝတွေဆိုတာလည်း ရှိချင် ရှိမယ်။ မရှိချင်မရှိဘူး။ ဒီဇာတ်ကားထဲကလို ကျွန်တော်တို့သေဆုံးခါနီးမှာ ရှိနေတဲ့ ကြောက်ရွံ့စိတ်တွေ အတွေးတွေဟာပဲ နောက်ဆုံးကျန်ရစ်ခဲ့လိမ့်မယ် ဆိုရင် ထိုစိတ်တွေဟာ ဘယ်လိုပုံပန်းသဏ္ဍာန်တွေနဲ့ကျန်ရစ်နေခဲ့မှာလဲ.. ကျွန်တော်တို့သေဆုံးမဲ့နေရာမှာ ကျန်ရစ်နေခဲ့ကြမှာလား။
ကျွန်တော် အထက်မှာ Alien နဲ့ဆိုင်တဲ့ အမြင်ကနေ ပြောပြခဲ့ပြီးပြီ။ ဒါပေမဲ့ ကျွန်တော့်မှာ နောက်ထပ်အမြင်တွေ ရှိသေးတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ဒီဇာတ်ကားဟာ metaphors တွေအရမ်းသုံးထားတာကြောင့် ဘက်ပေါင်းစုံကနေ ကြည့်လို့ရတဲ့အမြင်တွေတိုင်းက ကျွန်တော်ကြည့်မိလိုက်တယ်။
ဒီဇာတ်ကားဟာ Cancer ရောဂါအကြောင်းကို ဥပမာအနေနဲ့တင်ပြထားတဲ့ ဇာတ်ကားတစ်ကား ဖြစ်နိုင်တယ်။ ပထမဆုံးဇာတ်ဝင်ခန်းမှာ Lena က သူမရဲ့တပည့်တွေကို cancer cells က ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းမှာ ဘယ်လိုပွားလာတယ်ဆိုတာ ရှင်းပြနေခဲ့တယ်။ နောက်တော့ သူမရှင်းပြခဲ့တယ်။ လူသားတိုင်းရဲ့cells တွေဟာ နောက်ဆုံးမှာ အသွင်ကူးပြောင်းပြီး အသက်အရွယ်ကြီးရင့်လာခြင်းဆိုတဲ့ အဆင့်ကို ဖြစ်စေသွားတယ်ဆိုတာ ရှင်းပြခဲ့တယ်။ ကျွန်တော်တို့လူသားတွေလိုပဲ ကျွန်တော်တို့နေထိုင်နေတဲ့ ကမ္ဘာကြီးမှာလည်း Cancer ရှိနေခဲ့မယ်ဆိုရင်ရော။ Cancer cells တွေဟာ တဖြည်းဖြည်းနဲ့မျိုးပွားလာသလို ရုပ်ရှင်ထဲက Shimmer ဟာလည်း တဖြည်းဖြည်းနဲ့ကျယ်ပြန့်လာတယ်။ သူကျယ်ပြန့်လာတာနဲ့အမျှ သူ့ဒေသထဲက အရာတွေဟာလည်း ပုံပြောင်းလာတော့တယ်။
Co-Dependence and Environment
ကျွန်တော် ယခုရုပ်ရှင်ကြည့်နေစဉ်အတွင်း အတွေးတစ်ခု ဝင်ရောက်လာတယ်။ အကယ်၍ ထို Shimmer အပြင်မှာ တစ်ကယ်ရှိခဲ့မယ်ဆိုရင် သူပြောင်းလဲဖန်တီးနေတဲ့ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုဟာ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ယနေ့အကျည်းတန်တဲ့ ကမ္ဘာနဲ့ ကွာခြားနေမယ်ဆိုတာပဲ။ ကျွန်တော်တို့လူသားတွေဟာ ကမ္ဘာမြေကြီးကို နည်းမျိုးစုံနဲ့ဖျက်ဆီးခဲ့ကြတယ်။ ယခုလည်း ဖျက်ဆီးနေတုန်းပဲ။ နောင်လည်း ဆက်ဖျက်ဆီးနေကြလိမ့်မယ်။ ထိုအကြောင်းအရာကို metaphor တစ်မျိုးနဲ့မနှစ်က mother! ဆိုတဲ့ရုပ်ရှင်ကားမှာ ကျွန်တော်တို့ကြည့်ခဲ့ပြီးပြီ။ Shimmer ဟာ လေထုအတွင်းညစ်ညမ်းမှုတွေကို လျော့ချစေပြီး သဘာဝဘေးအန္ဓရာယ်တွေကနေ ဝေးစေတယ်။ မျိုးစိတ်တွေနဲ့သူတို့အမှီသဟဲပြုနေတဲ့ Ecosystem ကြီးဟာ အေးချမ်းမယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်။ Lena ကလည်း ဇာတ်ဝင်ခန်းတစ်ခုမှာ ပြောခဲ့တယ်။ Shimmer ဟာ လူသားမျိုးနွယ်စုတွေနဲ့ကမ္ဘာကြီးကို ဖျက်ဆီးနေတာ မဟုတ်ဘူး။ ပြောင်းလဲပေးနေတာ လို့ပြောခဲ့တယ်။ ပျက်စီးနေတဲ့ကျွန်တော်တို့ကမ္ဘာကို ပြောင်းလဲချိန်တန်ပြီလေ။ ဒါတွေကြောင့်လည်း သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကို ထိန်းသိမ်းဖို့ဆိုတဲ့ အကြောင်းပြချက်တစ်ခုရဲ့metaphor လားလို့လည်း ယူဆမိခဲ့တယ်။
နောက်ထပ် ကျွန်တော်ရှင်းပြနိုင်တာ တစ်ခုကတော့ အိမ်ထောင်ရေးပဲ။ ဒီဇာတ်ကားဟာ မသာယာတဲ့ အိမ်ထောင်ရေးတစ်ခုကို Metaphor တွေအနေနဲ့ပြသသွားနိုင်တယ်လို့လည်း ပြောလို့ရတယ်။ ဇနီးက ဖောက်ပြန်နေတယ်။ ဒါကို ခင်ပွန်းဖြစ်သူက သိတယ်။ ဒါပေမဲ့ သိသိရက်နဲ့ကြိတ်ခံစားပြီး သူဆက်နေခဲ့တယ်။ နောက်ဆုံး ခင်ပွန်းသိနေခဲ့တယ်ဆိုတာကို ဇနီးသိသွားခဲ့တယ်။ ဒီလိုနဲ့သူတို့နှစ်ဦး နောက်ဆုံး ပြန်တွေ့ကြတဲ့အခါ သူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့ဘဝတွေကို အတူတူ ဘယ်လိုဆက်သွားကြတော့မှာလဲ ဆိုတဲ့ မေးခွန်းတစ်ခုလည်း ရခဲ့သေးတယ်။ ဒါကတော့ အတွေးစသပ်သပ်တစ်ခုပါ။
Self-Destruction (Psychological and Behaviours)
ဒါပေမဲ့ ဇာတ်ကားရဲ့တစ်ကယ့်ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ လူသားတွေရဲ့မိမိကိုယ်ကို ဖျက်ဆီးခြင်းဆိုတဲ့ စိတ်ကို အလေးပေးပြီး ပြသသွားတာလို့ကျွန်တော်ယုံကြည်မိတယ်။ တစ်ညမှာ ကင်းစောင့်နေတဲ့ Ventress ဆီကို Lena က သူမအချိန်မရောက်သေးခင် သွားပြီး စကားသွားပြောတယ်။ သူမတို့နှစ်ယောက်ပြောနေရင်းနဲ့Lena ရဲ့ခင်ပွန်းဖြစ်သူ Kane အကြောင်းပြောမိကြတယ်။ Kane ဘာကြောင့် ထို Suicide Mission ကိုရွေးခဲ့သလဲဆိုတာကိုပေါ့။ ဒီမှာ Ventress ကပြန်ဖြေတာက
“I think you're confusing suicide with self-destruction, and they're very different. Almost none of us commit suicide, whereas almost all of us self-destruct. Somehow. In some part of our lives. We drink, or take drugs, or destabilise the happy job... or happy marriage.” တဲ့။
မိမိရဲ့အသက်ကို မိမိဘာသာ အဆုံးသတ်ခဲ့ကြတဲ့ သူတွေရှိတယ်။ ဒါပေမဲ့ ကျွန်တော်တို့လူသားတွေ အကုန်လုံးက မိမိကိုယ်ကို တစ်နည်းနည်းနဲ့ဖျက်ဆီးနေခဲ့ကြတယ်။ အရက်သောက်ရင် အသည်းထိခိုက်မယ်ဆိုတာ သိတယ်။ ဒါပေမဲ့ ကျွန်တော်တို့ဂရုစိုက်ပြီး ရှောင်ကျဉ်ခဲ့ကြလား။ ထိခိုက်မယ်သိရဲ့နဲ့ဆက်သောက်ကြတယ်။ ဆေးလိပ်သောက်ရင် အဆုတ်ထိမယ်ဆိုတာသိလည်း ဆေးလိပ်ဘူးခွံ့မှာတောင် " ဆေးလိပ်သောက်ခြင်းသည် ကျန်းမာရေးကို ဆိုးရွားစွာ ထိခိုက်စေသည်။” လို့ရေးသားထားတာတောင် ကျွန်တော်တို့ဆက်သောက်ကြတယ်။ ထို့အတူပဲ။ အလုပ်တွေမှာလည်း လခကောင်းနေတာတောင် တစ်ခါတစ်ရံစိတ်ညစ်စရာလေး တစ်ခုနှစ်ခုလောက်နဲ့ကျွန်တော်တို့တွေ ထွက်ခဲ့ကြတယ်။ မိဘတွေဆိုတာ ကျွန်တော်တို့အပေါ် ကောင်းတဲ့စကားတွေပြောဆိုနေပေမဲ့လည်း မိဘဆိုပြီး နားမထောင်ခဲ့တာတွေ၊ အစရှိသည်ဖြင့်နဲ့ကျွန်တော်တို့လူသားတိုင်းဟာ မိမိရဲ့အသက်ရော၊ မိမိရဲ့ဘဝတွေကိုရောပါ တစ်နည်းနည်းနဲ့ဖျက်ဆီးပစ်နေကြတယ်။ မိမိဘာသာ ဖျက်ဆီးတယ်လို့ပြောရခြင်းဟာ ကျွန်တော်တို့တွေဟာ ထိုလုပ်ရပ်တွေရဲ့ဆိုးကျိုးတွေကို သိသိကြီးနဲ့ဆက်လုပ်နေခဲ့ကြလို့သုံးထားတဲ့ အသုံးအနှုန်းတစ်ခုပဲ။
ဒီဇာတ်ကားထဲက လူသားတိုင်းဟာလည်း ထိုနည်း၎င်းပဲ။ သူတို့ဘဝတွေကို ကျွန်တော်တို့တစ်ချက်ကြည့်လိုက်ကြရအောင်။ Psychologist Ventress ကိုယ်တိုင်က Cancer ရောဂါရရှိနေတဲ့ ဝေဒနာရှင်တစ်ယောက်။ အရှေ့မှာလည်း စစ်သားတွေကို သေမယ်ဆိုတာ ကြိုသိခဲ့တဲ့ Mission ကြီးတစ်ခုကို သူမစေလွှတ်ခဲ့တယ်။ Anya (Paramedic) ကတော့ ဆေးစွဲနေတဲ့ တစ်ယောက်ဖြစ်တယ်။ Jossie (Physicist) ကတော့ သူမလက်ကို သူမဓားနဲ့လှီးပြီး သတ်သေဖို့ကြိုးစားခဲ့ဖူးတယ်။ ဒါကြောင့်လည်း “Ventress wants to face it. You want to fight it. But I don't think I want either of those things.” လို့Lena ကို သူမရဲ့နောက်ဆုံးခန်းမှာ ပြောခဲ့တယ်။ Cass (Surveyor) ကလည်း သူမရဲ့သမီးသေဆုံးခြင်းအပေါ် အခုထိ နောင်တရနေတဲ့သူတစ်ယောက်။
Lena ရဲ့ခင်ပွန်းဖြစ်သူ Kane ဟာ သူရဲ့ဇနီးက သူမရှိတဲ့အချိန်မှာ ဖောက်ပြန်နေတယ်ဆိုတာ သိနေတယ်။ ဒီခါးသက်တဲ့ အမှန်တရားကို ငြင်းပယ်နေရတဲ့ သူ့စိတ်ကပဲ ထို Mission ကို ဝင်ရောက်ဖို့လှုံ့ဆော်မှုတွေ ဖြစ်လာစေတယ်။ ဒါကြောင့်လည်း သူ မသွားခင် မနက်မှာ သူရဲ့အတွင်းကနာကျင်မှုတွေကို မဖော်ပြခဲ့ဘူး။ သူသိနေခဲ့တယ်။ သူထွက်ခွာသွားတဲ့အခါမှာလည်း သူရဲ့ဇနီးဟာ နောက်ကွယ်မှာ ဆက်ပြီး ဖောက်ပြန်နေမယ်ဆိုတာ။ ဒါကြောင့် နောက်ဆုံးခန်းမှာ သူ့ဘဝကို သူအဆုံးသတ်ခဲ့တယ်။ ဆက်နေဖို့ခွန်အားတွေမှ မရှိတော့တာ။
ဒီလိုပဲ။ Lena ကိုယ်တိုင်ကလည်း မိမိရဲ့ခင်ပွန်းအပေါ်မှာ ဖောက်ပြန်နေခဲ့တဲ့ သူတစ်ယောက်။ သူမလည်း သူမကိုယ်သူမရော၊ သူမနဲ့ဖောက်ပြန်နေတဲ့ သူကိုရော သူမမုန်းတီးချင်မုန်းတီးနေလိမ့်မယ်။ ဒါပေမဲ့ ဆက်ဖောက်ပြန်နေတုန်းပဲ။ ဒါကြောင့် Kane လိုပဲ ဒီ Shimmer ကြီးထဲကို ဝင်ရောက်သွားရင် သူတို့ဘဝတွေ တနည်းနည်းနဲ့အဆုံးသတ်သွားကြတော့မယ်ဆိုတာ သိသိရက်နဲ့သူတို့အကုန်လုံးဟာ Self Destructive Mission ကြီးတစ်ခုထဲကို ဝင်ရောက်လာခဲ့ကြခြင်းပဲ ဖြစ်တယ်။
Lena တို့ဝင်ရောက်သွားခဲ့တဲ့ Shimmer ဟာ Lena တို့လူသားတွေထဲက self-destruction ဆိုတဲ့ သဘာဝက ပေးထားတဲ့ ဆန္ဒတစ်စုံနဲ့မျိုးပေါင်းသွားပြီး သူကိုယ်တိုင်လည်း သူ့ကိုယ်သူ ဖျက်ဆီးခဲ့ခြင်းများလား။
Annihilation ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားဟာ ကြည့်ခဲ့သူ ပရိသတ်တွေကို အတွေးတွေနဲ့ခြောက်ခြားစေသလို ရုပ်ရှင်ရဲ့အလွန်မှာ ဆက်လက်တွေးတောနေမဲ့ အတွေးစတွေလည်း ချန်ရစ်ထားခဲ့တယ်။ ဒါပေမဲ့ အဆုံးသတ်မှာတော့ ရုပ်ရှင်ဟာ ဘယ်ဇာတ်ကောင် သေမယ်၊ ဘယ်ဇာတ်ကောင်ရှင်မယ်ဆိုတဲ့အချက်တွေထက် လူသားတွေရဲ့အတွင်းစိတ်သဏ္ဍာန်ကို ဖွင့်ဟပြသခဲ့တဲ့ ဇာတ်ကားတစ်ကားပဲ ဖြစ်ခဲ့တယ်။ ကြည့်ရှုသူ ပရိသတ်တွေအတွက် ဒီဇာတ်ကားက ပြောသွားတဲ့အရာတွေဟာ လူတိုင်းရဲ့အတွေးပေါ် မူတည်ပြီး ပြောင်းလဲနိုင်ဖို့ယခု Annihilation ရုပ်ရှင်ဟာ ကျွန်တော်တို့ရဲ့အတွေးစတွေကို ဖွင့်ပေးခဲ့တော့တယ်။
IMDb’s Rating: 7.2/ 10
Rotten Tomatoes’ Rating: 87%
May 4, 20212min read Science Fiction
Jan 20, 2021 1 min read Science Fiction